HOMTOM S8 dị ọnụ ala karịa ka ọ bụla mee ememme mmalite ya | Gam akporosis
HOMTOM S8 dị ọnụ ala karịa ka ọ bụla mee ememme mmalite ya
Anyị na-e ekwu okwu banyere OMLỌ S8, smartphone mbụ nke ika ahụ nwere ihuenyo 18: 9. Onye nrụpụta a na - esochi njedebe ndị ọzọ dịka Samsung Galaxy Note 8 site na ịmalite ngwaọrụ pụrụ iche.
Ma ugbu a, iji mee mmemme mmalite ekwentị a dị ebube, onye nrụpụta emeela nkwekọrịta na Gearbest ka ị nwee ike zụrụ ya na HOMTOM S8 naanị euro 141 Na mgbanwe.
Nke a bụ HOMTOM S8
Ma imewe , ekwentị nwere ihuenyo 5.7 nke anụ ọhịa nwere akụkụ 18: 9 na akụkụ ihu na-enweghị atụ, yabụ imewe nke ekwentị bụ ezigbo mma. Na nke a, anyị ga-agbakwunye igwe ekike nke na-enye ngwaọrụ ahụ ezigbo njedebe. Cheta na HOMTOM S8 ga-adị na etiti abalị, Coral Blue, Arctic Silver na Gold.
Ile anya na mpempe akwụkwọ teknụzụ nke HOMTOM S8 o doro anya na ọ ga-agbakwunye etiti etiti mpaghara ahụ. Aga m amalite site na ikwu maka ihuenyo ya 5.7 nke anụ ọhịa na-egosipụta mkpebi 720 x 1440 + HD na mgbakwunye na nha ihuenyo 18: 9. N'okpuru hundu anyị ga-ahụ otu n'ime ihe ngwọta nke MediaTek. Ana m ekwu maka nhazi MT6750T tinyere 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime.
Na mpaghara igwefoto, HOMTOM S8 nwere sistemụ igwefoto abụọ nke dị n'azụ nwere oghere 16-megapixel nke Sony bịanyere aka na ya na nke abụọ 5-megapixel lens, ezigbo ihe mejupụtara maka ịse foto dị omimi. Anyị enweghị ike ichefu igwefoto 13 megapixel ya nke ga-atọ ndị hụrụ selfies ụtọ.
N'ikpeazụ, mee ka batrị 3.400 mAh pụta ìhè, karịa iji kwado oke oke nke ngwaike nke ekwentị a na-arụ ọrụ na gam akporo 7.1 N. Kedu ihe ị chere gbasara HOMTOM S8?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HOMTOM S8 dị ọnụ ala karịa ka ọ bụla mee ememme mmalite ya
Otu esi emepụta ozi mara mma na bọtịnụ na Telegram
Samsung Galaxy Rịba ama 8 nyere iwu ka ịmalite na September 12 na India